Ekubeni okokuqala kwaziswa kwiminyaka engaphezu kwamashumi amabini edlulileyo, i-WordPress ikhulile (kwaye ikhulile) ngoku ngoku kuthiwa ikhutshwe njenge-weltweit beliebtes Managementsystem. Namhlanje, ngaphezu kwekota iiwebhusayithi ezikhoyo ziqhutywa kwi-WordPress.
Kodwa ukususela ngexesha elidlulileyo, in eyaziwayo kakhulu kukuba, abantu baninzi bafuna ukunyusa kwiindlela ezingenanto. Jonga nje kwi-Microsoft Windows kunye inani elikhulu le-Malware, ii-Virus nezinye izinto yenzelwe ukujolisa nje kule nkqubo eyodwa yokusebenza.
2 Härten Sie Indawo ukhuseleko Wand
2.1 7. Khusela i-Verzeichnis yakho ye-wp-admin
2.5 11. Backup, Backup Kunye Backup!
3.1 Iingcinga Finale
Ukukhusela iphepha lakho lokungena alikwazi ukufezwa yiphina inye in ethile, kodwa ngokuqinisekileyo kukho amanyathelo kwaye iifowuni zokhuseleko unokuthatha ukuze wenze naluphi na ukuhlaselwa okuncinci ukuphumela.
Ukunyanzeliswa kwamaphepha oktionena kungenye yeendlela eziqhelekileyo zokuhlaselwa kwewebhu iwebhusayithi yakho inokuthi ijongane nayo. Ukuba unokwazi ukuqagela igama Eligqithisiweyo okanye igama lomsebenzisi, iwebhusayithi yakho ngokuqinisekileyo ayizukuba kukujolisa kuphela kodwa ekugqibeleni ibe lixhoba. Ukusuka kumava, uninzi lweendawo zokuzama ukukhangela izame uktionena kunye nokhetho oluphambili lwamagama abasebenzisi. Ezi zibini zokuqala zihlala ‘zilawulwa’ okanye ‘ngumlawuli’, ngelixa eyesithathu ihlala isekwe kwigama lakho lesizinda.
Ngokomzekelo, ukuba isayithi lakho liyi-crazymonkey33.com, umnqwenga angazama uktionena ngemvume nge ‘crazymonkey33’.
Ukuba usebenzisa enye yeephasiwedi kunye newebhusayithi yakho yamkela nayiphi na i-Verkehr, i-Website yakho iya kufutshwa ngokukhawuleza kamva okanye kamva.
Iphasiwedi eqinileyo iya kubandakanya umxube wir:
Yiba yi-alphanumerisch (AZ kunye no-az)
Ubuncinan Ubuncinan be8
Okungaphaya kwegama lakho lephasiwedi, likhuseleke ngakumbi. Zama eli jenerethi yegama le-Passwort xa unenkathazo ephakamileyo. https://passwordsgenerator.net/
I-RecCaptcha yenzelwe ukuyeka izixhobo zokusebenza ngokusebenza kwisayithi. Mutterschaf, kunikezelwa ubunzima bokusetyenziswa kwezixhobo namhlanje, ezi zinokugqithiswa ngokulula, kodwa ubuncinci kukho olo lukhuseleko olongezelelweyo.
Uninzi lwabaduni luya kuzama uktionena ngephepha lokungena legama elingenagama, elihlala liyinto efana
Login LockDown kwaye Lösung Sicherheitslösung Zombini zinikezela ngezisombululo ezinkulu zokukhusela iphepha lakho lokungena kwiwebhusayithi. Balandela iidilesi ze-IP kwaye banciphisa inani lokuzama uktionena ukukhusela iwebhusayithi yakho.
Härten Sie Indawo ukhuseleko Wand
7. Khusela i-Verzeichnis yakho ye-wp-admin
Ukwenza njalo, uzakufuneka ungene ngemvume kwipaneli yokulawula i-akhawunti yakho. Ingaba usebenzisa cPanel oder Plesk, ukhetho o lukhangelayo ‘Iphasiwedi-khusela izalathisi’
Ngenye indlela, unokukhusela i-Passwort kwisikhangeli ngokuthi uthinte iifayile zakho .htaccess kunye .htpasswds. Iinkcukacha zenyathelo-nyathelo kunye nesikhokelo sekhowudi ziyafumaneka simahla kwa IDynamic Drive.
Uxhumano lweHTTP gegen HTTPS (Umthombo: Sucuri)
Ngaphandle kwesiza ngokwaso, uya kufuna ukugcina uxhulumaniso phakathi kwakho kunye nomncedisi kwaye yilapho i-SSL ingena khona ukubethela ukuxhumana kwakho. Ngokuqhagamshelana nge-verschlüsselt, abahlaseli abayi kukwazi ukunciphisa idatha (njengephasiwedi yakho) xa uxhulumana nomncedisi wakho.
Ngelixa oku akunakuyigcina indawo yakho ekutshixeni kunceda ekulweni nasekuhlaselweni kakubi. Abanye abaphethi banenjongo yokuhlisa iiwebhusayithi, bazenze bangakwazi ukufikelela kuluntu. I-CDN iya kunceda ukutsala ngokuvuthelwa kwe-Ukuhanjiswa okuchaseneyo kweNkonzo uhlaselo kwindawo yakho.
Hacker phantse bafune ukusizakala ngobuthakathaka kunye nokuxhaphazwa okuyaziwayo okushiywe kungafihliwe kumane kucele inkathazo. Oku kuhamba ngokuphindwe kabini kwiiplagi ezivame ukudala ngamakhampani amancinci anezixhobo ezincinci.
Ngokufanelekileyo, yenza indawo yokuvavanya ebeka izibuko kwindawo yakho ephilayo kwaye uvavanye ukuhlaziywa apho. Xa uqinisekile ukuba yonke in isebenza kakuhle ngoko ungasebenzisa ukuhlaziywa kwisayithi ephilayo.
11. Backup, Backup Kunye Backup!
Ngokuqhelekileyo umncedisi wakho wewebhu uza kuza kunye nezinye izinto ezisisiseko zokugcina, kodwa ukuba ungeyonto efana nam, qho qinisekisa ukuba wenza iifayile zakho ezizimeleyo. Ukuxhaswa akulula nje nje ukukopisha ezinye iifayile, kodwa qwalasela ingcaciso kwi-Datenbank yakho.
Khangela isisombululo sokukhusela esilungileyo kwaye savunywa. Nokuba utyalo-mali oluncinci lufanelekile ukuba ulondoloze ngezinyembezi kwimeko yengxamiseko. In efana BackupBuddy Unokukunceda ukugcina yonke in equka isiseko sakho kwiziko elilodwa.
Nangona ngokuqhelekileyo, iinkampani zokubamba iwebhu zinikezela indawo yokusingatha indawo yethu, iixesha zitshintshile. Ababoneleli be-Web-Hosting, ekuqapheliseni isidingo esiphuthumayo sokwandisa ukhuseleko, baye baqhubela phambili, baninzi banika iinkonzo ezongezelelweyo zenkxaso-mali ukuze bazalise i-web-hosting yabo.
Thatha umzekelo HostGator, elinye lamagama asekelwe ngakumbi kumdlalo. Ngaphandle kwezixhobo ezisemgangathweni ze-Cloudflare, i-HostGator (ngentengo ye- $ 10 + / mo) iphinda ifike ngoKhuselo lwe-Spam yamahhala, ukuKhutshwa kweMalware ngokuzenzekelayo, i-Backups.
Nanku apho in efana nayo LweNanja Sicherheit kungena, okukunceda uhlole indawo yakho ngenxa yobuthathaka.
Kukho izizathu ezimbalwa eziphosakeleyo zokusebenzisa in efana ne-Sicherheit Ninja kodwa ndivumele ukuba ithuluzi endikucebisa ukuba lisetyenziswe kwizigaba ezininzi ekuhambeni kwakho ukugcina indawo yakho.
Emva koko kusekelwe kwezo ziphumo, sebenzela ukufumana indawo yakho. Ukhuseleko lwe-Ninja lwenza ngaphezulu kweemvavanyo ze-50 ukuhlola ubungqina bakho. Nangona emva kokuba wenze utshintsho lwakho, ligijime kwakhona (kunye naliphi ixesha kukho utshintsho lwesayithi okanye i-plugin Updates) ukuvavanya indawo yakho.
Ukuba le nto ithetha njengomsebenzi omncinci kakhulu kuwe, i-Sicherheit Ninja iphinda ifikelele iimodyuli ezongeziweyo (Pro-Version, indawo enye ye-29) enokukunceda ukulungisa iingxaki ezifumanekayo.
Khusela ifowuni yokungena kwi-brute-force-Angriff
Nangona zonke ezi zinto zingabonakala zigqithiseleyo kumsebenzisi oqhelekileyo we-WordPress, ndiqinisekisa ukuba yonke in (kunye nokunye) iyimfuneko. Ukungaziboni iinkcukacha ze-hack emhlabeni wonke kwaye ungenzi ixesha elithile, ndivumele ukwabelana nawe ngolwazi oluthile kwiziko ezininzi ezifihlakeleyo ndinceda ukulawula.
Ekuqaleni kwaqala njengendawo elula ye-biografie, ndadala www.timothyshim.com. Kucacile ukuba, yinto nje endinokumisela kwaye ininzi yexesha ihamba yodwa, nje ngeyona nkcazelo. Ngexesha elide leenyanga, kwesi siza ayenzi nto kwaye ayiqokeleli idatha, ubhekane nokuhlaselwa kwe-30 – inhlanganisela yamandla enqabileyo kunye neyinkimbinkimbi.